कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा थप,अनलाइनबाटै ओपीडी टिकट - SatyaPatrika
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवामा पहुँच विस्तार गरिएको छ ।
अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु आएसंगै जटिल रोगका उपचार तथा शल्यक्रिया लगायतका सेवामा विस्तार गरिेको हो ।
यसका साथै अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण, मेसिन र औजारहरु पनि भित्रिएका छन् । साथै अस्पतालमा थप विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उपलब्ध भएकासंगै वरामीको उपचारमा सहज भएको छ । अस्पतालमा स्थापनादेखि नै पहिलो पटक टाउकोको शल्यक्रिया सेवा सुरु गरिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । जुन सेवा कर्णाली प्रदेशका अन्य कुनै पनि अस्पतालमा छैन ।
लामो समय संघीय राजधानी काठाण्डौँका विभिन्न अस्पतालहरुमा सेवा पु¥याएका न्यूरो सर्जन डाक्टर निलम कुमार मानव आएपछि पहिलो पटक न्यूरो सम्बन्धी शल्यक्रिया हुन थालेको हो । न्यूरो सर्जन डाक्टर निलम प्रदेश अस्पतालमा आएदेखि २५ वटा टाउको र दुई वटा ढाडको अप्रेसन गरिएको छ । कर्णालीमा टाउकोमा चोटपटक लागेका विरामी धेरै आउने गरेको डाक्टर निलमले बताए ।
अस्पतालले ओपिडी सेवाको समय पनि बढाएको छ । यसअघि विहान १० बजेदेखि ३ बजेसम्म दिने गरिएको ओपीडी बिरामी जाँच सेवा विहान ९ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म बनाइएको छ । शुक्रबार भने ९ बजेदेखि २ बजेसम्म सेवा दिइने छ । नाम दर्ता सेवा विहान ८ बजेदेखि नै दिन सुरु गरिएको छ ।
यस्तै अस्पतालमा स्वास्थ्य विमा गरिएका नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ छ्ट्टै फाँटबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसले गर्दा सहजता भएको र सेवाग्राही पनि थपिएको अस्पतालका प्रवक्ता डा बिकास केसीले जानकारी दिए ।
प्रदेश अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ५३ हजार ४ सय ५३ जनालाई ओपीडी र ८ हजार ९ सय ६३ जनालाई आकस्मिक सेवा दिएको छ । त्यही अवधिमा ४ हजार ९ सय ४९ जना महिलाहरुले अस्पतालबाट सुत्केरी सेवा लिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विकास केसीले जानकारी दिए । केसीकाअनुसार अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु आएसंगै शल्यक्रिया हुने संख्या बढेको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा अस्पतालबाट २ हजार ४ सय ५७ अप्रेसन भएको डा. केसीले बताए । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा भने १ हजार ९ सय ५२ वटा सल्यक्रिया गरिएको थियो ।
अस्पतालमा अक्सिजनको सहज व्यवस्थापन
जसअनुसार हाल केही बेडमा पाइपलाइनबाटै अक्सिजन आपूर्ति भइरहेको भन्दै अस्पतालले चाँडै सबै बेडमा अक्सिजन सहज रुपमा उपलब्ध हुने जनाएको छ । अस्पतालका निर्देशक डाक्टर डम्बर खड्काका अनुसार अस्पतालमा थप प्लान्ट संचालनको तयारीमा गरिएको छ । अब विरामीले अक्सिजनको सिलिण्डर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । हामी दशैंअघि नै पाइपलाइनबाटै हरेक बेडमा अक्सिजन आपूर्ति हुने व्यवस्था गर्दैछौं’ डा. खड्काले भने, । साथै उनले अस्पतालमा थप सेवा र चिकित्सकहरु उपलब्ध गराउनका लागि सरकारसँग माग गरिएको समेत जानकारी दिए ।
सेवा र सुविधा विस्तार भएसंगै अहिले प्रदेश अस्पतालमा विरामीको चाप पनि बढेको छ । विरामीको चाप बढेका कारण चेकजाँचका लागि ओपीडी टिकट लिन पालो कुर्नपर्ने अवस्था छ । तर अस्पतालले यसलाई मध्यनजर गर्दै अब अनलाइनबाटै टिकट काट्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसले विरामीलाई लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा मिल्ने अस्पतालको दाबी छ ।
यस्तै अस्पतालले हटलाइन सेवा पनि सुरु गरेको छ । विरामी र तिनका आफन्तले अब अस्पतालमा सिधै ९८५८०५७७५५ र ९८५८०४५७५५ मा फोन गरेर सेवा लिन वा गुनासो राख्न सक्नेछन् । यस्तै अस्पतालले आकस्मिक कक्षमा उपचार गराइरहेका विरामीका लागि २४ सै घण्टा ल्याव, विलिङ र औषधि सेवा पनि सुरु गरेको छ । योसंगै अस्पतालले अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएको र विपन्न परिवारका विरामीका लागि निशुल्क खानाको व्यवस्थापन गर्नकां लागि योजना बनाएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालयमा आगजनी